केले बनाउँछ स्कूल राम्रा, स्कूल नराम्रा ? - Shikshak Maasik
by • • स्थलगत • Comments (0) • 3472
तर, एउटै भेगका केही विद्यालयले कसरी ‘राम्रा’ प्रअ–अध्यक्ष पाउँछन् र पढाइमा प्रगति गर्छन् अनि त्यहींका अरू विद्यालय चाहिं किन प्रअ, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिबीच पोला–पोल र घोचाघोचको चक्रमा परेर बर्बादीतिर उन्मुख हुन्छन् ? यो प्रश्न भने अझ् पनि अनुत्तरित नै छ । यसको जवाफ पाठकहरूले लेखी पठाउनुभएमा सहर्ष प्रकाशित गरिनेछ ।
भारदेउस्थित गुप्तेश्वर निमावि
१ कक्षाको हाजिरीकापीमा १५ जनाको नाम लेखिएको भए पनि जम्मा ६ जना उपस्थित थिए । कक्षा ३ को हालत पनि उस्तै, ७ जनामध्ये कक्षामा ३ जना मात्र । कक्षा ४ मा छिर्दा १२ बजिसकेकोे थियो । अरू कक्षाको तुलनामा धेरै विद्यार्थी थिए यहाँ, १८ जना । यिनीहरू पनि ‘ए’ देखि ‘जेड’ र ‘क’ देखि ‘ज्ञ’ सम्म सहजै भन्न/लेख्न सक्दैनन् । त्यस दिन ४ कक्षाका विद्यार्थीले लगातार तीन पिरियड त्यसै बिताएका थिए । गणित, सामाजिक र नेपाली शिक्षक नआएपछि उनीहरू त्यसपछिका शिक्षकलाई कुरिरहेका थिए ।
गुप्तेश्वर माविमा दुई जना बालविकास सहजकर्तासहित स्थायी ४, राहत ३ र निजी स्रोतका ३ गरी १० जना शिक्षक छन् । प्रधानाध्यापक शेरबहादुर तामाङ त्यस दिन विद्यालयकै कामले बाहिर रहेको शिक्षकहरूले बताए । गयल भएका अरू तीन जना शिक्षकबारे कसैलाई थाहा थिएन । एक दिन ४ जना शिक्षक अनुपस्थित हुनु भनेको विद्यार्थीको करीब २० पिरियड पढाइ नहुनु हो ।
यहाँ अपर्झट बाहेक बिदा बस्नु पर्दा सबै शिक्षकले अघिल्लो दिन नै जानकारी गराउँदा रहेछन् । त्यस्तो बेला कक्षा व्यवस्थापनदेखि अन्य शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा स्कूल इन्चार्ज सहायक प्रधानाध्यापक लोकनाथ घिमिरेलाई सुम्पिइएको छ । यहाँ ३२२ जना विद्यार्थी छन् । कक्षा ६ मा सामाजिक विषयकी शिक्षक ‘रोल प्ले’ गर्न लगाएर पढाइरहेकी थिइन् । विद्यार्थीले नै बनाएका चार्ट पेपर कक्षाकोठाका भित्तामा सजाइएका थिए ।
स्कूल समयमै हिलो पानीमा पौडिन खोज्दै गुप्तेश्वर माविका साना नानीहरू
नल्लु गाविसस्थित देवी निमाविका विद्यार्थी छुट्टीपछि घर फर्कंदै
यस क्षेत्रका स्रोतव्यक्ति ढकबहादुर कार्की विद्यालयमा आउने साधन स्रोत पारदर्शी बनाएर कार्यक्रम–योजनाबारे अभिभावकसँग छलफल र समन्वय गर्दै अघि बढेमा नल्लुका अरू दुई विद्यालय– गुप्तेश्वर प्रस्तावित मावि र देवी निमाविले पनि आफूलाई सुधार गर्न सक्ने आशा व्यक्त गर्छन् । मूलतः प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सक्रिय हुँदा विद्यालयमा सकारात्मक परिवर्तन आउने उनको बुझइ छ ।
रोश्ना सुब्बा, धीरज बस्नेत; तस्वीरः खड्गबहादुर मगर